ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား လွတ်မြောက်ရာသို့ ရောက်သွားပြီ – Mr. Goat on the line of duty | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်ရစ်၏ ဓာတ်ပုံရိုက်ကျွမ်းကျင်မှု အားနည်းခြင်းကို သူပို့လာသော ပုံတွင် အထင်းသား တွေ့ရသည်။ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား၏ မျက်နှာကို ရိုက်ယူနိုင်ခြင်း မရှိချေ။ သို့သော်ငြား – လူမည်းရပ်ကွက်အတွင်း ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ရောက်သွားကြောင်း၊ ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲ လုပ်ထားကြောင်း စသဖြင့် သူ၏ ဂျီတော့ မက်ဆေ့ခ်ျတွင် အတွင်းကျကျ ရေးထား၏။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:သရော်စာ, သောင်းပြောင်းထွေလာ	2 Responses to ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား လွတ်မြောက်ရာသို့ ရောက်သွားပြီ – Mr. Goat on the line of duty san nay yar on January 17, 2013 at 10:10 pm Dr. sate phwa: Lunatic
admin on January 17, 2013 at 10:21 pm https://www.facebook.com/ElevenMediaGroup/posts/600629303287612
လွှတ်တော်က သတင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဖတ်ကြပါ။
လွှတ်တော်ကို မီဒီယာနဲ့ တိုက်လို့ မခံနိုင်ကြသူများပေ့ါ
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများဇွန်မိုး - မြန်မာပြည်သို့ပေးစာ - မမေ့နိုင်တဲ့ ၁၉ ဇူလိုင် Hle Dan Incident goes to President
Cartoon Box (1,539)